Ahoana ny fivoaran'ny fisamborana nomerika nomerika | Martech Zone
Ahoana ny fivoaran'ny fisamborana nomerika nomerika
Alatsinainy Oktobra 24, 2016 Alatsinainy Oktobra 24, 2016 Muhammad Yasin
Efa elaela ny fisamborana firaka. Raha ny zava-misy dia firy ny orinasa mahavita manao GET orinasa. Mitsidika ny tranonkalanao ny mpanjifa, mameno endrika mitady fampahalalana izy ireo, manangona izany vaovao izany ianao ary miantso azy ireo. Tsotra, marina? Ehh… tsy araka ny noeritreretinao azy.
Ny fotokevitra, ao aminy irery, dia tsotra adala. Raha ny teôria dia tokony ho mora be ny misambotra fitarihana marobe. Mampalahelo fa tsy izany. Na dia mety ho mora aza izany folo taona lasa izay, nanjary natahotra kokoa ny mpanjifa amin'ny famelana ny mombamomba azy ireo. Ny fieritreretana dia izy ireo (ny mpanjifa) dia hampiditra ny mombamomba azy ireo amin'ny endrika (manana fikasana hahazo vaovao) ary tototry ny antso an-tariby, mailaka, sms, mailaka mivantana sns. Na dia tsy izany aza no misy ho an'ny orinasa rehetra, ny sasany dia manilika ny fanantenana amin'ny alàlan'ireto tolotra ireto - ary tena manelingelina.
Raha ny voalaza, dia mihavitsy ny mpanjifa mameno ny endrika mitarika tsy miovaova.
Ankehitriny, rehefa lazaiko ireo endrika firaketana static, ny tiako holazaina dia ireo endrika fohy izay misy habaka 4-5 ho an'ny mombamomba anao (anarana, nomeraon-telefaona, mailaka, adiresy, sns.) Ary mety misy fizarana fanehoan-kevitra hametraka fanontaniana haingana na hanome Feedback. Ireo endrika dia mazàna tsy mahazaka habaka iray taonina amin'ny pejy iray (noho izany dia tsy mihoapampana izy ireo), saingy tsy manome zavatra sarobidy azo tsapain-tanana ho an'ny mpanjifa koa izy ireo.
Amin'ny ankabeazan'ny tranga dia mameno ny mombamomba azy ireo ny mpanjifa mba hahafahan'izy ireo mahazo fampahalalana fanampiny (avy amin'ny orinasa) any aoriana. Na dia tsy misy olana manokana amin'ity scenario ity aza, ny fampahalalana fanampiny izay angatahan'ny mpanjifa dia lasa fivarotana. Na dia mahazo ny vaovao nangatahin'izy ireo aza ny mpanjifa dia mety tsy te-hamidy izy ireo - indrindra raha mbola eo amin'ny sehatry ny fikarohana izy ireo.
Mbola misy ny endrika gen genika static, saingy maty vetivety izy ireo mba hanome lalana ireo fomba mivoatra kokoa amin'ny fitarihana nomerika nomerika. Ny endrika fitarihana (na sehatra kokoa) dia nanjary malama sy mandroso kokoa handraisana ny filan'ny mpanjifa sy ny filàna - manome ny mpanjifa antony hanomezana izany fampahalalana izany. Ity misy fomba fivoaran'ny fisamborana firaka nomerika:
Ny Forms Lead Gen dia nanjary "nifandray" sy "nifandray"
Ireo endrika firaka tsy miovaova dia izany fotsiny: izy ireo voasakantsakan'ny. Tsy manintona izy ireo; ary tsoriko fa somary mankaleo izy ireo. Raha toa mankaleo (na ratsy kokoa, toa tsy ara-dalàna), dia kely dia kely ny fahafahan'ny mpanjifa mameno ny mombamomba azy ireo. Tsy ny mpanjifa ihany no te hieritreritra zavatra mahafinaritra na fahafinaretana tonga eo aminy (ary raha mamirapiratra sy mamirapiratra ny zava-drehetra dia mety ho izany), azon'izy ireo antoka koa fa tsy amidy amin'ny antoko faha-3 na ampiasaina tsy ara-dalàna ny fampahalalana azon'izy ireo. Tian'izy ireo ho fantatra fa ho any amin'izay lazain'izy ireo fa mandeha ny vaovao.
Ny iray amin'ireo zavatra lehibe indrindra mitranga mitarika endrika dia izy ireo lasa malama, mifandray bebe kokoa ary mahasarika kokoa.
Raha tokony ho endrika iray mangataka fampahalalana tsotra momba ny fifandraisana dia maro ny fanontaniana apetraka - ary mba hisorohana ny fahasosorana, ireo fanontaniana ireo dia aseho amin'ny fomba miavaka.
Orinasa maro no nanomboka nampiasa menus drop-down, safidy maro, ary na dia ny famenoana lahatsoratra aza mba hahazoana antoka fa mijery azy ireo hatrany ny mpanjifa. Ankoatr'izay, ny endrika firaka dia nanjary namboarina manokana, ary ny orinasa ankehitriny dia afaka mametraka fanontaniana mety hahaliana ny mpanjifa. Raha tokony hahatsiaro tena ho fampiharana ianao, ity endrika vao novolavolaina ity dia toa mameno profil iray - iray izay azo alefa amin'ny mpivarotra izay hanampy azy ireo fa tsy hivarotra amin'izy ireo.
Omena lanja TENA ny mpanjifa
Raha miverina dimy taona monja ianao dia mety ho tadidinao fa ny ankamaroan'ny famenoana endrika dia fomba tsotra fotsiny hangatahanao fampahalalana bebe kokoa. Napetrakao ny mombamomba ny fifandraisanao, mety misy fampahalalana tianao kokoa, tonga ianao handefa ary miandry olona hifandray aminao. Indraindray ianao dia hisoratra anarana amin'ny gazety iray isam-bolana na zavatra mitovy amin'izany - saingy tena tsy misy dikany izany.
Mandrosoa haingana ao anatin'izay dimy taona izay, ary hitantsika izao fa miaraka amina endrika tsy miovaova, lasa feno fifanakalozana ny famenoana ny firaka. Raha tokony hahazo valiny toy ny “Misaotra anao nandefa ny taratasy firaketanao. Misy olona hanatratra fotoana fohy ”, ny mpanjifa dia voatsabo avy hatrany amin'ny tolotra vokatra / serivisy, fihenam-bidy ary amin'ny tranga maro dia tara ny valin'ny fanombanana!
Ny iray amin'ireo zava-baovao andrasan'ny mpitsidika ny tranokala dia ny fanaovana quiz sy famenoana ny tombana.
Ny ohatra tsara amin'izany dia ny hoe "karazana fiara inona no mety aminao?" fanombanana. Ity dia karazana fanombanana izay ahitantsika ny tenanay manome amin'ny mpanjifanay fiara ho an'ny tanjona miteraka fitarihana fivarotana fiara vaovao. Amin'ity tombana ity dia mamaly fanontaniana vitsivitsy momba ny safidiny amin'ny fividianana / fiara ny mpanjifa. Vantany vao mandefa ny valinteniny izy ireo dia vokarina avy hatrany ho azy ireo ny valiny. Mba hanaovana izany, mazava ho azy, mila manome ny mombamomba azy ireo izy ireo. Raha liana te hahafantatra ny mpanjifa (ary antenainay fa misy izy ireo), dia hapetrany ao amin'ny mailaka nomen'izy ireo ary hahazo ny valiny izy ireo.
Raha tokony ho karazana scenario sy fanomezana sy fakana sary dia nanjary nifandray kokoa ny endrika firaka; manosika ny fifanakalozana mitovy eo amin'ny mpanjifa sy ny orinasa.
Raha misy mpanjifa mameno ny “fiara mandeha maninona mety aminao?” fanombanana ary milaza fa manana fianakaviana be dia be izy ireo, dia mety hahazo voucher hizaha toetra minivan manokana. Na, tsara kokoa, mety hahazo vola 500 $ eo ho eo amin'ny fiaran'ny mpianakavy izy ireo. Raha ny fanomezana lanja ny mpanjifa, ny azo atao dia tsy misy farany.
Miaraka amin'ny fanatsarana haingana ny haitao, maro ireo mpanome endrika mitarika no afaka mandray azy ho azy ny fampahalalana ampidirin'ny mpanjifa amina endrika mitarika azy ary hamadika izany ho tolotra iray izay misy ifandraisany amin'ny mpanjifa. Ireo endrika firaka dia tsy toy ny taloha intsony. Izy ireo dia niova ho zavatra lehibe lavitra noho izay noeritreretin'ireo mpivarotra maro. Raha mbola mivoatra sy mivoatra hatrany ny teknolojia fisamborana firaka, ny marika dia mila mivoatra ny fizotry ny fisamborana koa!
Tags: fanombanana ny mpanjifafisamborana ny mpanjifafakana sary nomerikaatiny fifandraisanatraikefa ifaneraseranafisamborana firaka interactivefisamborana firaka amin'ny Internetfitarihana firaka
Muhammad Yasin dia talen'ny marketing ao amin'ny PERQ (www.perq.com), ary mpanoratra navoaka, miaraka amin'ny finoana matanjaka amin'ny doka marobe izay manome valiny amin'ny alàlan'ny media nentim-paharazana sy nomerika. Ny sangan'asany dia fantatra amin'ny fahombiazany amin'ny famoahana toy ny INC, MSNBC, Huffington Post, VentureBeat, ReadWriteWeb, ary Buzzfeed. Ny fiaviany ao amin'ny Operations, Brand Awcious, ary Digital Marketing Strategy dia miteraka fomba iray atodika amin'ny famoronana sy ny fanatanterahana ny fampielezana haino aman-jery azo havaozina.
Maty ve ny endrika mitarika?
Ahoana ny fomba hamoronana paikady marketing hanamafisana ny fananganana finday?